Makedonia · Global Voices teny Malagasy
Tantara misongadina mikasika ny Makedonia
Mediam-bahoaka10 Septambra 2021
Bolgaria12 Avrily 2021
Ho an'ny fitsaràna Eorôpeàna dia tsy manantsiny amin'ny resaka fanalàna baràka nanenjehana azy tamin'ny 2010 ilay Makedôniàna mpanao gazety
Fahalalahàna miteny15 Novambra 2020
Tantara mikasika ny Makedonia
Repoblika Tseky 09 Jolay 2021
Nampahatsiahy ny fahatsiarovana ny tranga iray teo an-toerana nahitana ny polisy nidaroka ny olom-pirenena foko Roma tamin'ny volana Septambra 2020 ihany koa ny hetsika.
Okraina 07 Jona 2021
Tsy nahita ny mivantana anjotra ny webinar Global Voices Insights tamin'ny 20 mey 2021 momba ny fifaninanan-kira Eurovision? Indro ny famerenana momba azy.
Fanatanjahantena 17 Avrily 2021
Anisan'ny kolontsaina iraisana any Yogoslavia teo aloha ny fomban-drazana amin'ny fanangonana sy fifanakalozana karatra Panini afaka apetaka , saingy niteraka buzz manokana ny 'Euro 2020' tamin'ity taona ity.
Fahalalahàna miteny 04 Desambra 2020
Irian'ity bilaogera mpiresaka fivezivezena ity mba ho “babom-pitiavana” an'i Makedônia Avaratra ireo Pôlôney mpiray tanindrazana aminy
Albania 14 Novambra 2020
"Ary hitohy handresy lahatra ireo Pôlôney aho hoe ireo ao Balkàna dia tsy vanja milevina fa kosa tavin-divay iray."
Tariky ny Al Jazeera Balkàna, voatafika nandritra ny hetsipanoheran'ny antoko avy amin'ny elatra havanana tao Skopje
Fahalalahàna miteny 24 Septambra 2020
Tsy nanaiky ilay ramatoa mpanao gazety niharan'ny herisetra fa nitory teny amin'ny pôlisy ary naka toerana hanohitra ny kolontsain'ny tsimatimanota
Eoropa Andrefana 13 Jolay 2020
Nilaza ny governemanta fa tsy nisy voakitika tao anatin'izany fanafihana izany. ny rakitra manokan'ireo mpampiasa
Mahazo tohana avy amin'ny Fiangonana Ortôdôksa Rosiana ireo vondrona manohitra ny vaksiny any Balkana
Rosia 29 Avrily 2020
Arovan'ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana ny zon'ireo Ray aman-Dreny hisafidy ny tsy hanao vaksiny ny zanany.